Darpan Nepal – ओमन बाट एक नेपाली चेलीको गुहार, उनि निकै ठुलो संकटमा परेकोले सबैले शेयर गरी उद्धारको लागि सहयोग गरौँ ! (लाइभ भिडियो)
ओमन बाट एक नेपाली चेलीको गुहार, उनि निकै ठुलो संकटमा परेकोले सबैले शेयर गरी उद्धारको लागि सहयोग गरौँ ! (लाइभ भिडियो)
Apr 06, 2018Admin12Social0Like
यो भिडियो सियर गरि सहयोग पुर्याउनु होला । तपाईको एक सियरले निकै महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ यी चेलीलाई उद्दार गरौ ।
0096897136831, 0096891287780 एदि तपाईं हरु ओमन मा हुनुन्छ भने यो नम्बर मा कन्ट्याक्ट् गरि सयोग गर्नु होला उहाँ को नम्बर !
तीन दिन देखि हाम्री नेपाली चेली दुर्गा गुरुङ ओमन स्थित घरेलु काम मा आबद्ध भैरहेको अबस्था मा सोयम घर मालिक ले एक्दमै बार बार कुट्पिट यातना दिदै आइरहेको र अहिले कोठा मा बन्दक बनाएर राखिएको जानकारि पाएको छौ
यो भिडियो सक्दो सियर गरि रबि लामिछाने दाजु लगाएत अन्य संघसस्ता सम्म सयोग पुर्याउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै उहाँ घर जान्छ घर पठा भन्दा आठ ८ हजार ओमनि पैसा मागेको उहाँ ले बताउनु भएको छ । उनको अनुरोध तलको भिडियोमा हेर्नुहोस्
२२ चैत, सिन्धुपाल्चोक । काठको पोलबाट गाउँ-नगरलाई मुक्त गर्ने बाचा गरेका सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिहरु सिमेन्ट वा स्टिलको पोल र तार माग्दै विद्युत प्राधिकरण कार्यालयमा धाउन थालेका छन् । जनप्रनिधिको माग अत्यधिक र सामाग्री कम भएकाले प्राधिकरणका कर्मचारी भने समस्यामा परेका छन् ।
वडाध्यक्षहरुलाई साथमा लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्रमा पुगेका बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले आवश्यकता पहिचान गरी पोल, तार र प्राविधिक सहयोग गरिदिन शाखा प्रमुख प्रमोदकुमार मिश्रलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष क्षेत्रीले प्राधिकरणले मनलाग्दी रुपमा पोल वितरण गरेको आरोपसमेत लगाए ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र विद्युतिकरणको काम गर्न अध्यक्ष क्षेत्रीले सुझाव दिए ।
पहुँचका आधारमा नभइ आवश्यकताका आधारमा पोल वितरण गर्नुपर्ने भन्दै क्षेत्रीले अत्यावश्यक ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणले तत्काल पोल पठाइदिनुपर्ने बताए । ‘गाउँमा पोल पुगेको छैन, तार लत्रिएको छ’, अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘सबैतिर सम्भव नभए पनि अत्यावश्यक ठाउँमा पोल पठाइदिनुस् ।’
फुल्पिङकोटको सिमासिङमा पोल लगिइसकेको र गाढ्ने काम सुरु हुन लागेको भन्दै बत्ती बाल्नका लागि आवश्यक तार पनि उपलव्ध गराइदिन पनि उनले शाखा प्रमुखलाई आग्रह गरे । ‘पोल किनेर ल्याइसक्यौं, हामी आफैं गाढौंला’, उनले भने, ‘सिमासिङमा बत्ती बाल्नुपर्‍यो तार पठाइदिनुस् ।’
गाउँपालिका अध्यक्षका साथ प्राधिकरणमा पुगेका वडाध्यक्षहरुले वडाको सिफारीसमा मात्र गाउँमा पोल पठाउनुपर्ने भन्दै ब्यक्तिगत रुपमा कोही कसैलाई पोल नदिन आग्रह गरे । ‘आवश्यक्ता हेरेर हामी सिफारीस गरी पठाउँछौं अनि मात्र पोल पठाउनुस्, ब्यक्ति-ब्यक्तिलाई पठाएर हुँदैन’, बलेफी गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष कालीप्रसाद तामाङले भने ।
प्राधिकरणले स्थानीयतहसँग समन्वय नगरी तार र पोल वितरण गर्दा जनप्रतिनिधिहरुप्रतिको जनविश्वास घट्ने भन्दै बलेफी-२ का वडाध्यक्ष छविलाल न्यौपानेले शाखा प्रमुख मिश्रलाई आगामी दिनमा समन्वय गरेर काम गर्न अनुरोध गरे । ‘वडाध्यक्षले गर्दैनन् भन्ने बुझाइ विकास हुनसक्छ, त्यसकारण वडाका सिफारीसमा मात्र पोल पठाउनुहोला’, न्यौपानेले भने ।
प्राधिकरणको आफ्नै समस्या
पोल चाहियो भनेर दैनिक रुपमा धेरै जनप्रतिनिधिहरुको फोन आउने गरेको शाखा प्रमुख मिश्रले बताए । ‘हामीसँग सामग्री नै छ्रैन तर जनप्रतिनिधहरुको दबाव धेरै छ कसरी व्यवस्थापन गर्ने समस्या छ,’ उनले भने । केही महिना अघि आएको स्टिलको पोल आवश्यकता हेरेर वितरण गर्दा सकिने लागेको उनले बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष नै समस्या लिएर पहिलोपटक प्राधिकरणमा आएको बताउँदै विभिन्न गाउँनगरका वडाध्यक्षहरु भने दैनिकजसो पोल र तारका लागि आउने गरेको शाखा प्रमुख मिश्रले सुनाए । ‘वडाध्यक्ष ज्यूहरु त आइरहनुहुन्छ, आज गाउँपालिका प्रमुख नै आउनुभएछ’, उनले भने ।
आफ्नै स्रोतबाट पोल खरिद गर्दै स्थानीय निकाय
प्राधिकरणबाट मात्रै पर्याप्त पोल नपाउने भएपछि केही स्थानीय निकाय भने आफ्नै स्रोतमा विद्युतको पोल खरिद गर्ने अभियानमा लागेका छन् । जुगल गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले स्टिलको पोल खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरेका छन् ।
‘काठे पोलले गर्दा धेरै समस्या भयो, प्राधिकरणको मात्रै भर पर्दा समस्या हुने भयो, त्यसैले गाउँपालिका आफैले पोल खरिद गर्न लागेको हो,’ जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने । जुगल र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले असारभित्रै पोल खरिद गरेर वडाहरुमा वितरण गर्ने योजना बनाएका छन् ।
चुहावट रोक्न आग्रह
भूकम्पपछि अत्यधिक विद्युत चोरी हुने गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुले विद्युत चोरी रोक्ने अभियानमा स्थानीय तहको सहयोग पनि मागेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुनकोसी शाखा प्रमुख प्रमोद कुमार मिश्रले भूकम्पपछि विद्युत चुहावट अत्याधिक रुपमा भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे । गाउँबस्तिमा स्टिल पोल र तारको माग बढिरहेकाबेला विद्युत चुहावट नियन्त्रणका लागि उनले गाउँ तथा नगरका प्रमुख र वडाध्यक्षहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।
स्थानीय तहले विद्युतिकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहँदा चुहावट रोक्नका लागि पनि भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जताततै हुकिङ भइरहेको छ, चुहावट रोक्न अध्यक्ष ज्यूहरुले सघाउनुपर्‍यो’, शाखा प्रमुख मिश्रले भने ।
Previous Postबलात्कार, समस्या पुरुषको मानसिकतामा हो, लिंगको दोष होइनः शशी बस्नेत ! Next Postचटपटे वा कुनै पनि खानेकुरा छापीएको कागजमा राखेर खादा हुनसक्छ यस्ता जटील समस्या !